Tallaalka COVID-19 ee Loo Helayo Dhallinyarada 12 iyo Kuwa Ka Weyn | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Tallaalka COVID-19 ee Loo Helayo Dhallinyarada 12 iyo Kuwa Ka Weyn
Meey 19 , 2021
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ayaa u fasaxay tallaalka Pfizer COVID-19 ee dadka da'doodu tahay 12-15. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan dadka reer Minnesota ee jira 12 sano ama ka weyn ay xaq u leeyihiin in la tallaalo. CDC-da ayaa sidoo kale ku talisay in qof kasta oo jira 12 iyo wixii ka weyn la tallaalo.
Waqtigaan, tallaalka Pfizer COVID-19 waa tallaalka keliya ee COVID-19 ee la darsay loona oggolaaday in loo isticmaalo dadka da'doodu tahay 12-17. Shirkadaha kale ee soo saara tallaalku sidoo kale waxay darsayaan talaalkooda talaalada kooxaha da 'yar laakiin wali ma helin ogolaansho.
Ka hel macluumaad dheeri ah, oo ay ku jiraan sida iyo meesha laga helo tallaal, macluumaad ku saabsan hindisaha "Roll Up You Sleeves, Minnesota", iyo macluumaadka gaarka ah ee Gobolka Washington ee Bogga Tallaalka.